Tenisy – U16 vehivavy: hisolo tena an’i Afrika Aostraly i Madagasikara | NewsMada
Tenisy – U16 vehivavy: hisolo tena an’i Afrika Aostraly i Madagasikara
Hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, isan-tarika, ny ekipam-pirenena vehivavy, sokajy U16. Fihaonana, hotanterahina any Afrika avaratra, ny volana jona ho avy izao. Hisolo tena an’i Afrika Aostraly izany ny tovovavikely malagasy. Ny nandrombahan’i Madagasikara ny anaram-boninahitra, natao tany Windhoek, Namibia, ny talata lasa teo, ny nahazoan’izy ireo ny tapakila hiatrehana izany.
Raha tsiahivina, resin’i Madagasikara, teo amin’ny famaranana, tamin’ny fandresena 2 no ho 0, i Afrika Atsimo. Ranaivo Mialy, nanilika an’i Lamprecht, tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/3 ; 6/1) ary Ranaivo Narindra, nandavo an’i Kelly Arends, tamin’ny seta 2 no ho 0 ihany koa (6/3; 6/2).
Ankoatra izay, nandrombaka ny medaly volafotsy ihany koa ny sokajy U14 vehivavy, rehefa nandresy an’i Zimbaboe, tamin’ny fandresena 2 no ho 0. Razakaniaina Maholy, nandresy an’i Mauchi Tadiwanashe, tamin’ny seta 2 no ho 0 (7/5 ; 7/6) ary Rasendra Miotisoa kosa, nampiondrika an’i Tanyaradzwa Midziy, tamin’ny seta 2 no ho 0 ihany koa (6/3 ; 6/1).